Chikwata chema Warriors chakanyora nhoroondo nekusimudza mukombe weCosafa kechishanu
Chikwata chemaWarriors chaunza mufaro muZimbabwe panguva iyo varuzhinji vari kutarika nezvehupenyu.
Chikwata ichi neSvondo chakasimudza mufaro nekunyora nhoroondo itsva munhoroondo yemakundano eCosafa Castle Cup apo chakaita chikwata chekutanga kutora mukombe uyu kashanu nekurakasha Zambia 3-1 muRoyal Bafokeng Stadium kuSouth Africa.
MaWarriors akapa mufaro kunyika yeZimbabwe nezvibodzwa kubva kuna Knox Mtizwa, Ocean Mushure na Talent Chawapihwa.
Kukunda uku kwapa Zimbabwe mikombe yeCosafa Cup mishanu, mukombe mumwe chete pamberi peSouth Africa neZambia idzo dzine mikombe mina mushure mekunge maWarriors akambotora mukombe uyu muna 2000, 2003, 2005 na 2009.
Izvi zvafadza veruzhinji muZimbabwe kusanganisa VaTrymore Munyanyi avo vanoti vanofarira chikwata cheYadah muZimbabwe.
Pakutora mukombe uyu, Zimbabwe yakawana mari inoita zviuru mazana mashanu zvemarands , Zambia ikapihwa zviuru mazana maviri emari imwe cheteyo, nekusvika kwayo mufainari.
Mutsigiri weDynamos VaStanford Motsi vanoti kutora mukombe uyu kunopedza kudzikisirwa kwanga kuchiitwa maWarriors pasi rose kubvira muna 2009 apo vakapedzisira kukunda mumakwikwi aya.
MaWarriors akatora mukombe uyu zvinodadisa mushure mekunwisa zvibodzwa gumi nezvipfumbamwe mumitambo mitanhatu, zvichireva izvo kuti vaikanda zvibodzwa zvitatu pamutambo wega wega izvo zvakafadza murairidzi wavo Sunday Chidzambwa.
Uyu wave mukombe waChidzambwa wechitatu weCosafa mushure mekubudirira zvekare muna 2003 na 2009.
Mutambi wemaWarriors, Knox Mtizwa ndiye akadomwa kuve mutambi akarura kudarika vatambi vese vezvikwata gumi nezvina vaive pamakundano aya.
Mumwe mutambi weZimbabwe, Ovidy Karuru ndiye zvekare akatora mukombe wekunwisa zvibodzwa zvakawandisa mushure mekukanda zvibodzwa zvitanhatu, chibodzwa chimwechete kudarika Mtizwa.
Asi vakawanda muZimbabwe vari kupokana nesarudzo iyi vachiti ivo Karuru ndiye aifanira kuwana mikombe yese miviri iyi.
Mune imwe nyaya yemutambo wenhabvu, Caps United iri kudzoka kubva kuAlgeria isina mufaro mushure mekunge chikwata chemuZimbabwe ichi chakarohwa 4-1 neUSM Alger mumutambo wavo wekugumisira muGroup B reCaf Champions League.
Caps United ndiyo yapedza iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina nemapoinzi matanhatu, yakaenzana neZamalek iyo yakaita mangange 2-2 neAl Ahly Tripoli.
USM Alger iyo ine mapoinzi gumi nerimwe chete pamwe neAl Ahly Tripoli ine mapoinzi mapfumbamwe ndidzo dzave kuenda kuma kota fainari.
Mumitambo yeCastle Premier Soocer League, Black Rhinos ndiyo yave pamusoro pemakundano eCastle Lager Premier Soccer League mushure mekurakasha Tsholotsho Pirates 3-0.
Ngezi Platinum Stars iyo yaive pamusoro svondo rapera yave pachinhanho chechipiri mushure mekurohwa 1-0 neTriange apo vakashanya kuChiredzi.
Dynamos yadonha kubva pachinhanho chechipiri kuenda pachinzvimbo chechitatu mushure mekuita mangange 0-0 neChicken Inn kuBarbourfields Stadium neSvondo.
Mimwe mitambo yaiveko yakaepera seizvi….
Hwange 0 ZPC Kariba 1
Yadah 0 Shabanie 2
How Mine 2 Harare City 1
Bantu Rovers 0 Bulawayo City 0
Asi nyaya iri kutaurwa nezvayo kwese kwese ndeiyo yemaWarriors.